Intengiso yeGrasshopper | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 12, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
UHLAZIYO: The iziphumo zikweli phulo! Ukunyuka kwama-4,911% kwezithuthi ukususela ngo-Epreli ukuya kuMeyi; I-144,843 yevidiyo ibonwe ngezimvo eziyi-162; Ii-tweets ezili-1,500; Izithuba zeblogi ze-120 ngenyanga enye; IiTweets ezivela kuGuy Kawasaki, uKevin Rose, noJason Calacanis; Zisixhenxe iintetho zeTV zikazwelonke.
Ngokuhlwanje ndifike ekhaya ndafumana iFedEx ibhekiswe kwibhlog yam isuka Grasshopper. Okumangalisayo kukuba, ndavula iphakheji kwaye ndaye ndafumana iphakheji yetshokholethi yokwenyani egubungele iintethe - ngoku liphulo lokuthengisa!
Funda ukushicilelwa okuhle! Iphakheji emva koko ibhekisa umyalezo usuka I-Grasshopper kubaSomashishini:
I-Grasshopper isenokungabi yile nto ucinga ngayo! Ngokwenyani inkqubo edityanisiweyo yefowuni ebonakalayo (i-pbx ebonakalayo) kwinkampani yakho ebandakanya iinombolo zasimahla, ukugqithisela amandla kwikhaya, kwiselfowuni, eofisini… kunye nakwi-imeyile yemeyile ekwi-imeyile ukuthumela amandla kwi-imeyile. Iindleko zoluhlu luxhomekeke kwiphakeji ongathanda- kodwa ziqala kwi- $ 9.95 ngenyanga kwaye ziqala ukuya kuthi ga kwi-199 ngenyanga.
Ndingumnyangi wephulo lokuthengisa elinamathela kwisihlwele kwaye le yenye yazo! Ndingathanda ukufunda ngakumbi malunga nendlela i-Grasshopper egqibe ngayo ukuba oosomashishini ngabona bantu kujoliswe kubo kweli phulo. Ndijonge phambili ekufumaneni ukuba liphumelela kanjani eli phulo. Ukuba ayizukukhokelela kwingeniso ethe ngqo, ngokuqinisekileyo iya kuzisa ulwazi kwiGrasshopper!
Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba le nkonzo iza kukhuphisana njani kwaye ibambelele kuyo Google Voice xa ihamba bukhoma. Kubonakala ngathi i-Grasshopper inemisebenzi eyomeleleyo, kodwa amaxabiso kunye neendawo zemizuzu zinokunyanzela amanye amashishini amancinci.
Ngokubhekisele kwitshokholethi egubungele iintethe, ndizamile enye ndenza njalo nomhlobo wosapho. Ibingcamla njenge tshokholethi… nentwana ye crunch. Unyana wam nentombi yam bayala ukuzama enye.
tags: emailUmThengi ngokukhawulezaIJabberJiraI-JotFormKanbanToolIiLebhu zokuqalisa umdlaloUkoyamaKitEkhohloUkuBalwa kweNgxeloisibane solwandleUmCwangcisi woTywalaIlokitronIbhokisi yeposi
Ukuthengisa ukuKhokela ngePowerpoint?
Meyi 13, 2009 kwi-10: 26 AM
Enkosi ngokubhala okukhulu. Ndiyavuya ufumene iintethe kwaye ndiyathemba ukuba uzame enye.
Ndingathanda ukukhomba izinto ezimbini ozikhankanyileyo. Okokuqala, malunga nokuba bukhoma. Sibonelele ngoosomashishini abangaphezu kwama-70,000 ukuza kuthi ga ngoku (http://grasshopper.com/about) kwaye uqhubeke nokuphucula inkonzo esekelwe kwingxelo. Okwesibini, malunga neGoogle Voice. Njengenkonzo yabathengi, Izwi likaGoogle lilungile. Apho iNtethe yahluka khona iyilwe njengesixhobo soshishino. Ukongezwa kwabasebenzi kunye namasebe, iishedyuli zokuthumela umnxeba, i-portal ye-intanethi eyomeleleyo, ethembekileyo, kunye ne-24/7 yenkxaso ephilayo. Ngokwenyani, ukwandiswa kwakho kweGrasshopper kunokuthumela inombolo yefowuni yeLizwi likaGoogle kangangoko kunokwenzeka kwiBlackberry yakho, ifowuni yasekhaya, njl.
Ukuba ungathanda ukuvavanya ukuqhuba inkonzo, nceda undazise.
Meyi 13, 2009 kwi-9: 54 PM
Enkosi kakhulu ngokuphendula! Ndiyaqonda ngokupheleleyo ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kweshishini kunye nezicelo zabathengi - inqaku lakho lithathelwe kakuhle. Sivuyisana nawe ngokukhula nempumelelo yakho. Andiqinisekanga ukuba ndingasinika ingqwalasela eyaneleyo kwisicelo sakho… kodwa sele ndisebenze kwinani leziqalo, ngokuqinisekileyo ndiza kuba neNtethe kuluhlu lwam lweapps ukuba ndizame.